Home News Ururka Daacish oo sheegtay iney dileen xubno katirsan Al Shabaab
Ururka Daacish oo sheegtay iney dileen xubno katirsan Al Shabaab
Ururka Daacish ee dagaallama dalalka Soomaaliya, Ciraaq iyo Suuriya ayaa sheegtay in 14ka mid ah Al-Shabaab ay ku ku dileen howlgal ay ka fuliyeen degmada Qandala ee gobolka Bari,halkaasi oo ka agdhow Saldhigga Soomaaliya ee Daacish.
Wakaaladda Wararka ee Daacish ee lagu Magacaabo Acmaq sheegtay in Ciidamada Daacish ay weerar ku qaadeen Saldhig ay Ciidanka Al-shabaab ku lahaayeen degaanka B’ir Mirali oo koofur Galbeed uga beegan degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Warka lagu Daabacay Acmaq ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubnaha weerarka lagu qaaday ay diyaarinaayeen weeraro ka dhan ah Daacishta ku sugan Buuraha Galgala ee gobolka Bari.
Wargeyska Long War Journal oo soo xiganaya Acmaaq ayaa sheegay in Daacish ay billowday wax uu ku sifeeyay jawaab falcelin u ah weerarrada ka dhanka ah xubnaha Daacish ee ay Al-shabab ka geysato meelo ka mid ah Soomaaliya.
Maamulka Punland ayaa wali war kasoo saarin dagaalka ka dhacay duleedka degmada Qandala,maadaama degmada Qandala ay gacanta ku hayaan Ciidamada maamulka Puntland.
Sidoo kale ma jiro war kasoo baxay Al-Shabaab oo looga hadlay Sheegashadda Daacish ee ku aadan in ay dileen xubno ka mid ah Shabaab.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo shaacisay in ay dishay Saraakiil katirsan Ururka Al Shabaab
Next articlexubno katirsan Ururada Daacish iyo Al Shabaab oo lagu qabtay Magaalada Boosaaso
Faah-faahin: Qarax Ciidamada Dowlada lagula eegtay ceel-shaalle !!